ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ် Ban Bueng ဘန်ဘုံ မြို့ နယ်အတွင်းက ကိုရီယားနိုင်ငံသားပိုင် HANSOLTECHNICS (THAILAND) COMPANY LIMITED. )လျပ်စစ်ပစ္စည်းစက်ရုံမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူလူနာ ၃၀၀လောက်ရှိပေမယ် စက်ရုံပိုင်ရှင်က အလုပ်မပိတ်တာကြောင့် ရာဂဏန်းရှိတဲ့ထိုင်းနဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြလို့စက်ရုံကို ၇ ရက်ပိတ်ပြီး လိုက်နာမူမရှိရင် ကိုဗစ်ဥပဒေအရ အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာ ကပြောပြပေးမှာပါ။
ထိုင်နိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ် Ban Bueng ဘန်ဘုံမြို့ နယ်အတွင်းက ကိုရီယားနိုင်ငံသားပိုင် လျပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှာ ထိုင်းမြန်မာ အလုပ်သမားပေါင်း ၂၀၀၀ကျော် လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ စက်ရုံမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ လူနာ ၃၀၀ ကျော်ရှိပေမယ့် ပိုင်ရှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားက စက်ရုံကိုမပိတ်ပဲအလုပ်ကို ပုံမှန်ဆက်ဆင်း ခိုင်းထားတာကြောင့် ထိုင်းနဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့မှာပဲ လုပ်ငန်းခွင့်မ၀င်ပဲ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ဒီလိုဆန္ဒပြမူတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ဘန်ဘုံမြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pisit Sirisawas ဖိစစ်စီရီစ၀ပ် ကိုယ်တိုင်လာရောက် စစ်ဆေးဖြေရှင်းပေးခဲ့ရပြီး စက်ရုံကို (၇) ရက်ပိတ်ဖို့ညွန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ဘုံမြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pisit Sirisawas ဖိစစ်စီရီစ၀ပ် ပြောသွားတာကတော့ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာနဲ အနီးကပ်ဆုံးနေထိုင်နေရသူတွေကို ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ဒါအပြင်စက်ရုံကိုလည်း ၇ ရက်ပိတ်လိုက်ပြီး စောင်ကြည့်ရမယ် ။ ပိတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်း စက်ရုံကိုပိုးသတ်ဆေးတွေဖြန်းဖို့ကိုလည်း ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ် ။
ချွန်ဘူရီပြည်နယ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်နယ်တွေထဲက တခုဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ၄ ရက်နေ့တနေ့တည်းမှာပဲ အဲဒီပြည်နယ်မှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ ၁၀၀၀ကျော်ရှိနေပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းက စက်ရုံအတော်များများမှာ ကူးစက်မှုတွေဖြစ်နေပေမယ့် စက်ရုံကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရမှာမျိုး ပိတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာ အလုပ်သမားတွေအတွက် ထောက်ပံ့မူတွေပေးတာကိုစက်ရုံပိုင်ရှင်အတော်များများက မလုပ်လိုကြပါဘူး ။ စက်ရုံတွေမပိတ်ပဲ ဆက်အလုပ်စေခိုင်းနေတာတွေအပြင် ကိုဗစ်ကူးစက်လူနာတွေကို သီးသန့်ခွဲထားတာမျိုးတွေမလုပ်တာ ကူးစက်ခံရသူတွေကို ဆေးကုသဖို့ ၀န်ဆောင်မှုတွေလည်း ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်တဲ့အတွက် စက်ရုံတွေမှာ ရာဂဏန်းထိ ကူးစက်မူတွေက ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြု လူနာ ၆၇၂၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သြဂုတ်လ၄ရက်နေ့ တနေ့တည်း စံချိန်တင် ကူးစက်သူ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ သေဆုံးသူကတော့ ၅၅၀၀ကျော်ရှိလာပါတယ်။ အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာမြန်မာရွေပြောင်းအလုပ်သမား၅သောင်းကျော်ကူးစက်ခံထားရပါတယ်ရှင်။
ထိုငျးနိုငျငံ ခြှနျဘူရီပွညျနယျ Ban Bueng ဘနျဘုံ မွို့နယျအတှငျးက ကိုရီယားနိုငျငံသားပိုငျ HANSOLTECHNICS (THAILAND) COMPANY LIMITED. )လပျြစဈပစ်စညျးစကျရုံမှာ ကိုဗဈကူးစကျသူလူနာ ၃၀၀လောကျရှိပမေယျ စကျရုံပိုငျရှငျက အလုပျမပိတျတာကွောငျ့ ရာဂဏနျးရှိတဲ့ထိုငျးနဲ့ မွနျမာလုပျသားတှေ ပူးပေါငျးပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွလို့ စကျရုံကို ၇ ရကျပိတျပွီး လိုကျနာမူမရှိရငျ ကိုဗဈဥပဒအေရ အရေးယူမှုတှဆေကျလုပျမယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒီသတငျးကို ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မအေးအေးမာ ကပွောပွပေးမှာပါ။
ထိုငျနိုငျငံ ခြှနျဘူရီပွညျနယျ Ban Bueng ဘနျဘုံမွို့နယျအတှငျးက ကိုရီယားနိုငျငံသားပိုငျ လပျြစဈပစ်စညျးထုတျလုပျတဲ့စကျရုံမှာ ထိုငျးမွနျမာ အလုပျသမားပေါငျး ၂၀၀၀ကြျော လုပျကိုငျနတောပါ။ စကျရုံမှာ ကိုဗဈကူးစကျသူ လူနာ ၃၀၀ ကြျောရှိပမေယျ့ ပိုငျရှငျကိုရီးယားနိုငျငံသားက စကျရုံကိုမပိတျပဲအလုပျကို ပုံမှနျဆကျဆငျး ခိုငျးထားတာကွောငျ့ ထိုငျးနဲ့မွနျမာအလုပျသမားတှဟော သွဂုတျလ ၄ရကျနမှေ့ာပဲ လုပျငနျးခှငျ့မဝငျပဲ ဆန်ဒပွခဲ့ကွတာပါ။
ဒီလိုဆန်ဒပွမူတှဖွေဈပျေါနတေဲ့အတှကျ ဘနျဘုံမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး Pisit Sirisawas ဖိစဈစီရီစဝပျ ကိုယျတိုငျလာရောကျ စဈဆေးဖွရှေငျးပေးခဲ့ရပွီး စကျရုံကို (၇) ရကျပိတျဖို့ညှနျကွားခဲ့ပါတယျ။
ဘနျဘုံမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး Pisit Sirisawas ဖိစဈစီရီစဝပျ ပွောသှားတာကတော့ ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရတဲ့ လူနာတှအေတှကျ သငျ့တျောတဲ့နရောစီစဉျပေးဖို့ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာနဲ အနီးကပျဆုံးနထေိုငျနရေသူတှကေို ဆေးစဈမှုတှပွေုလုပျပေးဖို့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။ဒါအပွငျစကျရုံကိုလညျး ၇ ရကျပိတျလိုကျပွီး စောငျကွညျ့ရမယျ ။ ပိတျထားတဲ့ကာလအတှငျး စကျရုံကိုပိုးသတျဆေးတှဖွေနျးဖို့ကိုလညျး ညှနျကွားခဲ့ပါတယျ ။
ခြှနျဘူရီပွညျနယျဟာ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကူးစကျမှု အမြားဆုံး ဖွဈပှားနတေဲ့ ပွညျနယျတှထေဲက တခုဖွဈပွီး သွဂုတျလ၄ ရကျနတေ့နတေ့ညျးမှာပဲ အဲဒီပွညျနယျမှာ ကိုဗဈကူးစကျသူ ၁၀၀၀ကြျောရှိနပေါတယျ ။
ထိုငျးနိုငျငံတှငျးက စကျရုံအတျောမြားမြားမှာ ကူးစကျမှုတှဖွေဈနပေမေယျ့ စကျရုံကိုပိတျပဈလိုကျရမှာမြိုး ပိတျထားတဲ့ရကျတှမှော အလုပျသမားတှအေတှကျ ထောကျပံ့မူတှပေေးတာကိုစကျရုံပိုငျရှငျအတျောမြားမြားက မလုပျလိုကွပါဘူး ။ စကျရုံတှမေပိတျပဲ ဆကျအလုပျစခေိုငျးနတောတှအေပွငျ ကိုဗဈကူးစကျလူနာတှကေို သီးသနျ့ခှဲထားတာမြိုးတှမေလုပျတာ ကူးစကျခံရသူတှကေို ဆေးကုသဖို့ ဝနျဆောငျမှုတှလေညျး ထိထိရောကျရောကျမလုပျတဲ့အတှကျ စကျရုံတှမှော ရာဂဏနျးထိ ကူးစကျမူတှကေ ဆကျတိုကျဖွဈနရေတယျလို့ အလုပျသမားရေးဆောငျရှကျနသေူတှကေဆိုပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကိုဗဈအတညျပွု လူနာ ၆၇၂၀၀၀ ကြျောရှိပွီး သွဂုတျလ၄ရကျနေ့ တနတေ့ညျး စံခြိနျတငျ ကူးစကျသူ၂၀၀၀၀ ကြျောရှိပါတယျ။ သဆေုံးသူကတော့ ၅၅၀၀ကြျောရှိလာပါတယျ။ အတညျပွုလူနာတှထေဲမှာမွနျမာရှပွေောငျးအလုပျသမား၅သောငျးကြျောကူးစကျခံထားရပါတယျရှငျ။